टेक coms विफलता - न्यू योर्क टाइम्स - पुरस्कार पुरस्कार
समाचार ब्लग टेक coms विफलता
यो जोन कारबाट एक पाहुना पोष्ट हो, जसले मुख्य अपूर्व बिचारकर्ताहरू इन्टरनेटबाट बाल दुर्व्यवहार इमेजरी हटाउने बारेमा चिन्तित छन्। न्यू योर्क टाइम्स द्वारा अनुसन्धान मा मूल ब्लग जोनको डिजाईडेराटा मा देखा पर्‍यो साइट। हामीले जोनका अन्य भर्खरका ब्लगहरू प्रस्तुत गरेका छौं यहाँ, यहाँ र यहाँ.
सेप्टेम्बरमा न्यु योर्क टाइम्सले यसको उत्पादन गर्‍यो लेखको श्रृंखलामा पहिलो जसमा तिनीहरूले अनलाइन बाल यौन दुर्व्यवहार सामग्री (csam) को पहिचानमा विस्फोटक वृद्धि गर्न इन्टरनेट उद्योगको प्रतिक्रियामा ध्यान दिए।
तिनीहरू द्वारा प्रदान गरिएको तथ्या .्कहरू सुरू भयो NCMEC। 1998 मा तिनीहरूले csam को 3,000 रिपोर्टहरू प्राप्त गरे। 2018 को संख्या 18.4 मिलियन रिपोर्ट थियो, सन्दर्भ गर्दै 45 मिलियन अझै चित्र र csam को भिडियो।
हामीलाई एक मा सूचित गरिएको थियो पछि लेख 2013 मा 50,000 भन्दा कम csam भिडियो रिपोर्ट गरिएको थियो। 2018 मा यो 22 मिलियन सम्म थियो। भिडियो विकासको प्रमुख क्षेत्र भएको छ। को बाल संरक्षणका लागि क्यानाडाली केन्द्र र बेलायतको इन्टरनेट हेराइ फाउण्डेशन समान स्तरको वृद्धि देखिएको छ।
यी संख्याहरू भए पनि चकित पार्नेहरू, सायद उनीहरूले के देखाउँछन् केवल तुलनात्मक रूपमा थोरै इन्टरनेट कम्पनीहरूले क्यामेरा पत्ता लगाउन प्रयोग गर्ने उपकरणहरूको बढाइएको सक्रिय तैनाती र प्रभावकारिता हो।
यद्यपि न्यु योर्क टाइम्सका लेखहरूले मुख्यतया देखाएको फराकिलो इन्टरनेटको प्रतिक्रियाको अपर्याप्तता र उद्योगका केही प्रमुख कलाकारहरूको प्रतिक्रियाको असक्षमता नै हो। हामीलाई बगैंचाको बाटोमा लगिएको छ।
यदि बच्चाको सुरक्षा र सुरक्षा साँच्चै थियो सम्मिलित कम्पनीको संस्कृतिमान्यूयोर्क टाइम्स द्वारा प्रकाशित यस प्रकारका कथाहरू सम्भव थिएन। यद्यपि तिनीहरू वर्षौं देखि देखिन्छन् यदि पहिले त्यस्तो फॉरेन्सिक विवरणको साथ भने थिएन।
2006 मा टेक्नोलोजी गठबन्धन स्थापित भएको थियो। यहाँ यसको भनिएको मिशन छ
हाम्रो दृष्टिकोण अनलाइन बाल यौन शोषण निर्मूल गर्न हो। हामीले एक अर्कासँग सहकार्य गर्न र साझेदारी गर्नमा लगानी गरेका छौं, किनकी हामी यो मान्दछौं कि हामीसँग एउटै लक्ष्यहरू छन् र समान चुनौतिहरू धेरै छन्।
यो मानक रुब्रिक हो। तपाईं यो सबै समय सुन्नुहुन्छ। सबैजनाबाट यो सत्य होइन।
टेक कम्पनीहरूले अर्को तरीकाले हेरेर बाल अपहरणकर्ताहरू बलात्कार चल्छन्
त्यो दोस्रोको लागि शीर्षक थियो लेख न्यु योर्क टाइम्स श्रृंखलामा। यो इन्टरनेटबाट csam को छुटकारा पाउनको लागि एक ऊर्जावान, उद्देश्यपूर्ण सामूहिक उद्योग ड्राइवको अनुहार पूर्ण रूपले उड्दछ।
यहाँ टुक्राबाट केहि अर्कर्टहरू छन्:
कम्पनीहरूसँग सामग्रीको डाटाबेस बिरूद्ध नयाँ पत्ता लगाइएका छविहरू मिलाएर दुरुपयोग इमेजरीको पुनरावृत्ति रोक्न तकनीकी उपकरणहरू छन्। अझै उद्योगले उपकरणहरूको पूरा फाइदा लिदैन।
विशेष गरी हामीलाई भनिएको थियो
विश्वको सब भन्दा ठूलो सामाजिक नेटवर्क, फेसबुकले यसको प्लेटफर्मको राम्ररी स्क्यान गर्दछ, टेक कम्पनीहरूले झण्डा लगाएको चित्रणको 90 प्रतिशत भन्दा बढीको लागि लेखा, तर कम्पनीले सामग्रीहरू पत्ता लगाउन सबै उपलब्ध डाटाबेसहरू प्रयोग गरिरहेको छैन। (जोड जोडिएको)।
एप्पलले यसको क्लाउड भण्डारण स्क्यान गर्दैन। र यसको सन्देश अनुप्रयोग गुप्तिकरण, लगभग असम्भव पत्ता लगाउन। ड्रपबक्स, गुगल र माईक्रोसफ्टका उपभोक्ता उत्पादनहरू अवैध छविहरूका लागि स्क्यान गर्दछन्, तर केवल जब उनीहरूले उनीहरूलाई साझेदारी गर्छन्, जब तिनीहरू अपलोड हुन्छन्।
… सहित अन्य कम्पनीहरू। याहू (भेरिजनको स्वामित्वमा रहेको), फोटो खोज्नुहोस् तर भिडियोहरू होइन, अवैध भिडियो सामग्री वर्षौं देखि विस्फोट भइरहेको छ।
यस अनुसार पटक
सबै सम्बन्धित कम्पनीहरूले प्रयोग गर्न सक्ने छवि र भिडियोहरूका ह्यासहरूको एकल सूची छैन।
गुगल र फेसबुकले सीसम भिडियोहरू पत्ता लगाउनको लागि उपकरणहरू विकास गरे जुन फरक र नमिल्दो छ। भिडियो साझेदारीको लागि प्रक्रिया बनाउने योजना "औठाछाप" (पत्ता लगाउनको लागि ह्यासहरू) लाग्न सक्छ कतै पनि गएको छैन।
त्यहाँ अझै छ
टेक कम्पनीहरूले उनीहरूको प्लेटफर्ममा फोटोहरू र भिडियोहरू र अन्य फाइलहरू समीक्षा गर्न धेरै बढी सम्भावना गर्दछ।… मालवेयर पहिचान र प्रतिलिपि अधिकार प्रवर्तन। तर केहि व्यवसाय भन्छन कि दुरूपयोग सामग्री खोज्नु फरक छ किनकि यसले महत्वपूर्ण गोपनीयता सरोकार बढाउन सक्छ।
अमेजन, स्वीकार्य टेक्नोलोजी गठबन्धनको सदस्य होइन तर विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्लाउड सेवा प्रदायक, केहि पनि लागि स्क्यान गर्दैन।
अमेजनका लागि प्रवक्ता…। "ग्राहक डेटाको गोपनीयता हाम्रो ग्राहकहरुको विश्वास कमाउन को लागी महत्वपूर्ण छ," भने ...... माइक्रोसफ्ट Azure पनि यस्तै कारणहरु उद्धृत गरी, सामग्री को लागि स्क्यान छैन भनेर भने।
केहि विन्दुमा के यो डिकन्स्ट्रक्ट गर्न चाखलाग्दो हुनेछ "ग्राहकहरूको विश्वास" साँच्चिकै अर्थ हो।
र हामी यी सबै जान्दछौं किनकि ...
हामीले यो सबै कसरी सिक्यौं? के यो टेक कम्पनीहरु द्वारा खुला घोषणिको परिणामको रूपमा देखा पर्‍यो? स्पष्ट छैन। प्राज्ञिकहरूको एक समर्पित टीम द्वारा सावधान विश्लेषण अनुसरण गर्दै? होइन। के कानून प्रवर्तन निकाय, गैरसरकारी संस्था वा सरकारी एजेन्सीले सत्य उदा exposed्ग पारेको छ जसमा अन्ततः ओमेर्टे जनताको हितमा थिएन? होईन
हामीले यी अन्तर्दृष्टिहरू प्राप्त गरेका छौं किनभने न्यु योर्क टाइम्सको व्यवस्थापनले दुई जना पत्रकार माइकल केलर र गेब्रियल नृत्य, ठाउँ र स्रोतहरू आफैंबाट स्पष्ट रूपमा देखाइएको महत्त्वपूर्ण कहानी लिन निर्णय गरे।
गत सोमबार न्यु योर्क टाइम्सको अफिसमा मैले ती केटाहरूलाई पहिलो पटक भेटे तर मैले उनीहरूलाई जूनमा शुरुमा कुरा गरें। तिनीहरू फेब्रुअरी देखि csam अनुसन्धान गर्दै थिए, वरिपरि उडान (शाब्दिक), मान्छे को भीड संग कुरा, रेकर्ड मा एक साथ चीज piecing र रेकर्ड स्रोत बाहिर।
यो विशाल प्रयास थियो जुन कागजको पहिलो पृष्ठमा एक अनुरूप स्प्लैश बनायो। यसले अपेक्षित प्रभाव पाइरहेको देखिन्छ।
पाँच सिनेटरहरुबाट एक पत्र
न्यु योर्क टाइम्सका लेखहरूको एक तत्काल परिणाम गत हप्ता देखा पर्‍यो जब पाँच अमेरिकी सिनेट (दुई डेमोक्र्याट, तीन रिपब्लिकन) यस्तो लेखे एक प्रभावशाली विस्तृत पत्र तीस छ टेक कम्पनीहरु लाई। तिनीहरूसँग टेक्नोलोजी गठबन्धनका सबै सदस्यहरू छन् र यस बाहेक अरू धेरै। सिनेटर्सहरूले 4th डिसेम्बर भित्र उत्तरहरू चाहान्छन्।
हेरौं कसरी कम्पनीहरूले प्रतिक्रिया दिए। पत्रमा सबै सही प्रश्नहरू छन्। तिनीहरू ठीक प्रकारका टेक कम्पनीहरूलाई कानुनी रूपमा उत्तर दिनु आवश्यक छ। एक पटक बेलायतको चुनाव सकिएपछि हामी आशा गर्दछौं कि हामी द्रुत गतिमा कडा नियामक स्थापना गर्न सक्दछौं जसले उनीहरूलाई सत्य जवाफहरू प्राप्त हुने कुरामा विश्वास गर्न सक्दछन्। अमेरिकी कम्पनीहरूले कुनै पनि हिचकिचाहट वा अस्वीकारले सेनेटर्सको पत्रमा प्रतिक्रिया दिन यहाँ तत्परताको भावना बढाउनेछ।
न्यु योर्क टाइम्सले बच्चाहरूलाई विश्वभर नै मद्दत गरेको छ
केलर र नृत्य र उनीहरूका मालिकहरू धेरै संसारमा बच्चाहरू Childrenणी छन् तर यो अपमानजनक छोटो छ कि यो एक अखबार यो खुला उडान गर्न लाग्यो। यस किसिमको मामिलामा समयसँगसँगै लगातार संसाधनहरू र ट्र्याक गर्न र रिपोर्ट गर्न सक्ने क्षमता भएका सार्वजनिक हित समूह कहाँ छन्? यो अवस्थित छैन। यो हुनु पर्छ।
म युगहरुदेखि बहस गर्दैछु कि हामीलाई एउटा ग्लोबल वेधशाला चाहिन्छ, अन्य चीजहरु मध्ये न्यु योर्क टाइम्सले एक बन्दको रूपमा गरेको कुरा नियमित गर्न। कतै त्यहाँ एक उचित रिसोर्स्ड स्वतन्त्र एजेन्सीको आवश्यकता छ जुन बच्चाहरूको रुचि यसको हृदय र उच्च टेक उद्योगहरूमा यसको दृश्यमा छ। तर यस्तो शरीर समयको साथ दिगो हुनु आवश्यक छ। त्यो गर्नको लागि एक ठूलो र महँगो कुरा हो तर म अर्को गर्दै यो गर्न जाँदैछु।